Warshadda Bar, Alaab -qeybiyeyaasha - Soo -saareyaasha Bar Shiinaha
Biraha birta ah ee qaaska ah ee barbaro leh ee birta laba geeslaha ah A3 1045 q23545#
Birta labajibbaaran waa nooc ka mid ah walxo leh qaabab kala duwan, cabbirro iyo sifooyin ka samaysan ingot, billet ama biraha cadaadis ka shaqaynta. Waxaa loo qaybin karaa rogid kulul iyo rogaal qabow; Dhererka dhinac ee birta kulul ee duuban ee duuban waa 5-250mm, iyo tan birta labajibbaaran ee qabow waa 3-100mm.
ASTM 1020 1025 1035 1045 1050 C45 S45C S20C Carbon Steel Round Bar bir birta Qiimaha/Bixinta goynta mashiinka
Birta wareegsan waa nooc bir adag oo adag oo leh qayb wareegsan. Birta wareegsan waxay u qaybsantaa rogid kulul, been abuur iyo sawir qabow. Tilmaanta birta kulul ee duuban ee duuban waa 5.5-250mm. Waxaa ka mid ah: 5.5-25 mm bir yar oo wareegsan ayaa inta badan lagu bixiyaa xidhmooyin baararka tooska ah, kuwaas oo inta badan loo adeegsado xoojin, boolal iyo qaybo farsamo oo kala duwan; Birta wareegsan oo ka weyn 25 mm ayaa inta badan loo adeegsadaa soo saarista qaybaha farsamada, biilasha tuubada birta aan xuduudka lahayn, iwm.
Birta birta ah ee qabow ee jiingadda leh ee birta ah ee birta kulul ee la duubay birta 3-250mm
ASTM AISI SS ul dhalaalaysa 201 304 316 birta birta aan birta lahayn ee usha/baarka loogu talagalay dhismaha/Bixinta goynta mashiinka wax -goynta
Ahama birta birta ah ee wareegsan waa nooc ka mid ah walxaha dhaadheer, iyo waliba nooc ka mid ah baarka. Waxa loogu yeero birta birta ah ee birta ah waxaa loola jeedaa walxaha dhaadheer oo leh isgoys goobaabin wareeg ah, oo guud ahaan dhererkiisu yahay ilaa afar mitir. Waxaa loo qaybin karaa wareeg khafiif ah iyo ul madow. Wareegga loogu yeero, waxaa loola jeedaa dusha siman, ka dib markii daaweyn laga rogo; Iyo waxa loogu yeero bar madow, waxaa loola jeedaa dusha sare ee madow qaro weyn, si toos ah uga soo rogid kulul.
Flat Bar High Carbon Steel Flat Bar Fudud Flat Bar Flat From warshad Shiinaha
Birta fidsan waxaa loola jeedaa birta 12-300 mm ballaaran iyo dhumucdiisuna tahay 3-60 mm oo leh qayb leydi iyo gees waxoogaa yar. Birta caaga ah waa la dhammayn karaa birta, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii biibiile alxanka oo madhan iyo dhagaxa dhuuban ee xaashida dahaarka ah. Dhumucdiisuna waa 8 ~ 50mm, ballacuna waa 150-625mm, dhererku waa 5-15m, iyo dhererka qeexitaanka alaabtu waa cufan, kaas oo dabooli kara baahiyaha adeegsadayaasha. Halkii saxanka dhexdhexaadka ah, si toos ah ayaa loo alxan karaa iyada oo aan la jarin.